जेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भगाएपछि खैलाबैला – Khabar 27 Media
जेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भगाएपछि खैलाबैला
March 23, 2021 March 23, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on जेठाजुले आफ्नै कान्छी बुहारी भगाएपछि खैलाबैला
काठमाडौं:नेपालमा आजकल हरेक दिन नराम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह त्या कहिले आ त्म ह त्या कहिले चोरी त कहिले लुटपाट ।संकटकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही नसोचेको घटना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बनाउदै आएको छ । झापामा फेरि अर्को सोच्नै
नसकिने घिनलाग्दो घटना घटेको छ । श्रीमान १५ दिन कतै काम गर्न जादा एक परिवारमा जेठाजुले बुहारी भगाएका छन्। धर्म चाहार नाम गरेका पिडितयुवा मिडियामा आएर आफ्नो श्रीमती दाइले भगाएको भन्दै आफ्नो गुनासो पोखेका छन् । बलात्कार गरेको आरोपमा ८ बर्ष जेल बसेर आएका माइला
दाजुले आफ्नी श्रीमती लिएर १४ दिन अगाडी बाट बेपत्ता भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् तर अहिले सम्म उनकी श्रीमतीर दाइ फेला नपरेपछि उनि मिडियामा आएका हुन् ।आखि के हो त वास्तविक घटना ? तल भिडियोमा सबै जानकारी हेर्नुहोला । यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ
यो पनि पद्नुहोस;-बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलीफा सगरमाथा आरोहणका लागी बहराइनी टोलिको नेतृत्व गर्दै सोमबार नेपाल आइपुगेका छन् । उनीदुई हजार डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लिएर नेपाल आएपछि विवादमा मुछिएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले बराइनका राजकुमारलाई
भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउने अनुमति नदिइएको भए पनि उनले खोप ल्याएपछि चेकजाँच सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार खोप ल्याउनपूर्व स्वीकृती आवश्यक पर्छ । उता, लण्डनस्थित बहराइनको दूतावासले राजकुमार मोहम्मदलाई औषधि ल्याउने अनुमति दिइएको भएपनि आशंकाका
कारण उनीमाथि चेकजाँच सुरु भएको बताएको छ । नेपालस्थित बहराइको दूताबासका अनुसार राजकुमार मोहम्मदले ल्याएको उक्त खोप गोरखा जिल्लाकोचुमनुरबी गाउँमा वितरण गरिनेछ । राजकुमार मोहम्मदको भ्रमण व्यवस्थापक सेभेन समिट्स ट्रेकका प्रवक्ता थानेश्वर गुरागाईँले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई
उक्त टोली सात दिनको क्वारेन्टिन बसाइपछि गोरखा जाने र त्यहाँ खोप वितरण गरेपछि सगरमाथा आरोहणका लागि जाने योजना रहेको बताएका छन् ।कसरी भित्रियो खोप ?
नेपालमा दुई हजार डोज कोरोनाको खोप विनाअनुमति राजकुमार मोहम्मदले कसरी भित्र्याए भन्ने विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको विभागलेजानकारी दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने, “हामीलाई बहराइनका राजकुमार दुई हजार डोज कोरोना खोप लिएर आएका छन्भन्ने जानकारी आएको छ । यसको विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ ।” विभागका प्रवक्ता केसीका अनुसार नेपालमा कुनै पनि औषधि ल्याउनका
सरकारको अनुमति लिन जरुरी छ । सरकारलाई औषधि सही तरिकाले भण्डारण भएको समेत जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा माघ २६ गतेदेखिकोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने कार्यक्रम अन्तरगत हाल ६५ वर्ष उमेरसमूह माथिका व्यक्तिहरुले खोप लगाइरहेका छन् ।हेर्नुहोस भिडियो
श्रीमानले खोले श्रीमतीको यस्तो कर्तुत जुन रात केटा भेट्न जान्थिन त्यो रात श्रीमानलाई यस्तो भन्दी रहिछिन ३ चोटि फिर्ता गरे अब फेरि…(भिडियोसहित)
March 27, 2021 Shyam Lama
छोराछोरीलाई सुन्तला ल्याइदिँदैछु भनेका श्रीमानको १७ दिन पछि जंगलमा कु हि एको अवस्थामा श’ व फेला, एक महिला प,क्राउ (भिडियो हेर्नुस्)
February 19, 2021 Shyam Lama
February 23, 2021 February 23, 2021 Shyam Lama